Archive du 20171230
Marc Ravalomanana “Hitarika olana goavana ny fanakanana ahy”
Namerina indray omaly Atoa Marc Ravalomanana fa kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany ary hitarika olana goavana ny fanakanan’ny fitondrana azy tsy ho kandida amin’io taona ho avy io. Tsy hipetra-potsiny ary tsy hanaiky izany fanakanana ahy izany ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM), hoy izy ka aoka tsy hanao sangy ratsy.
Mihorohoro ny fitondrana Manamboninahitra 144 nakarina galona
Nirarakopana ny fanondrotana galona teo anivon’ny mpitandro ny filaminana nandritra ny filankevitry ny minisitra farany ho an’ny taona 2017 ny alakamisy 28 desambra lasa teo.
Rajaonarimampianina mivady Maka ny fon’ny ambany tanàna
Nanao bemidina nizara zavatra teny La Réunion kely ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady narahin’ny mpikamban’ny governemanta maromaro, toy ny minisitra Benjamina Ramanantsoa, Henry Rabary-Njaka, Jean Anicet Andriamosarisoa, Maharante Jean de Dieu, Zafilahy Ying Vah, Mamy Lalatiana Andriamanarivo, Herilanto Raveloharison, Lantoniaina Rasoloelison, Onitiana Realy … omaly.
Asa fanatsarana an’Antananarivo Hitombo ny hafainganam-pandeha amin’ny 2018
Anisan’ny teny filamatra apetraka eo anivon’ny fitantanana ny kaominin’Antananarivo Renivohitra ny “Antananarivo Renivohitra, soa iombonan’ny Malagasy”, hoy ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, raha nikabary nanoloana ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny CUA tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina izy omaly.
Polisy ao Antsiranana Misy terena hiambina karana
Fampitam-baovao avy amina raim-pianakaviana iray manana zanaka polisy miana-draharaha any Antsiranana no naharaisana fitarainana mikasika ny zava-manjo sy fanararaotana ireo mpitandro ny filaminana ambany grady sasany any an-toerana.
Ankizy kamboty sy sahirana Notoloran’ny vondrona Star fitaovam-pianarana
Mbola betsaka amin’ireo ankizy mpianatra amin’izao no tsy ara-dalana ny fitaovam-pianarany noho ny tsy fahampian’ny ho enti-manana eo anivon’ny tokantrano. Manampy trotraka izany ny halafosan’ny fitaovana, indrindra fa ireo kipitsony madinika izay nahitana fiakarany hatrany amin’ny 5 % tamin’ity fidiran’ny mpianatra taom-pianarana 2017-2018 ity raha kely indrindra